Chii chinonzi Fedora Silverblue. Tsananguro yekusuma | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | Kugoverwa, General
Iyi ndiyo peji yeprojekti yeSilverblue
Tsanangura kuti chii Fedora Silverblue zvinoda kuziva misiyano yayo nezvakagoverwa zvechinyakare. Kugoverwa uku ndiko mhinduro kune kunyunyuta kwangu pamusoro pekushaikwa kwepakutanga paLinux.
Saka ngatitangei nekutora tsananguro yakapihwa nevagadziri vayo:
Fedora Silverblue iyo isingachinjiki inoshanda sisitimu yedesktop. Chinangwa chayo ndechekugadzikana zvakanyanya uye kuvimbika. Zvakare, inovavarira kuve yakanakisa chikuva chevagadziri uye kune avo vanoshandisa container-centric workflows 'Zvanga zviri pachena kwauri here?
1 Kutsanangura izvo Fedora Silverblue ine fananidzo.
2 Kufanana uye misiyano neFedora Workstation
3 Kuiswa kwezvirongwa
3.3 Pasuru stratification
4 System kuvandudza
Kutsanangura izvo Fedora Silverblue ine fananidzo.
Zvichienderana nenzira yekugadzirisa, isu tinoziva mhando mbiri dzekugovera:
Izvo zvinoburitsa shanduro nyowani nguva nenguva. Fedora pachayo, Ubuntu kana Linux Mint
Uye iyo Rolling Inoburitswa iyo inogara ichigadziriswa: Arch Linux kana Manjaro, mienzaniso yakanaka.
Tinogona kufananidza boka rekutanga nekuenda kuimba nyowani nguva zhinji. Kana iri yechipiri, zvakafanana nekugadzirisa nguva nenguva mumba matinogara nguva dzose.
Fedora Silverblue angave kunge chivakwa chinowedzerwa uriri hutsva nguva nenguva. Imwe neimwe goridhe nyowani inosanganisa kuvandudza uye zvitsva zvine chekuita neye yapfuura. Zvino, ngatiti iwe haudi iyo pasi nyowani kana iine idonhe. Unogona kungodzokera kuburiro rako rekare uye wotarisira kuti vanovaka imwe nyowani. Uye kana iwe ukavenga iyo nyowani furati iwe unogona kugara uchiipaza.
Kana iwe uchida kunzwisisa kuti chii chinonzi Fedora Silverblue nemuenzaniso wehunyanzvi, pFunga nezve iyo Windows yekudzosa poindi system. Zvisinei, pane misiyano miviri yakakosha
MuFedora Silverblue unogona kuenda nekudzoka kakawanda sezvaunoda.
Dzosera mapoinzi zvinoitwa neshanduro dzemifananidzo kwete nemadheti.
Kufanana uye misiyano neFedora Workstation
Zvinogoneka kuti kuve nyanzvi yekuisa Fedora iwe unoda kusvetukira mudziva. Usazviita. Iyo yekumisikidza gwara pachayo inoziva kuti kune matambudziko kana kumisikidza mbiri bhutsu uye manyore kupatsanura. Izvo zvikamu izvo zvinotsigira ndezvi:
Mukati / var
/ var / imba
/ var / mudziyo
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti iyo Silverblue simaki haizive nezve izvi zvisingakwanisike uye ichagamuchira kugadzirwa kwemamwe marudzi ezvikamu, kunyangwe zvikasashanda mushure.
Mune dzidziso, Fedora Silverblue iri nyore kuisa uye inoda ruzivo rwehunyanzvi. Zvino kana iwe uchinetseka kuti zviripi zviratidziro zviripo, ini handina kukwanisa kuzviisa. Kwayedza katatu pa Virtualbox 3 uye pakanga pasina nzira. Kwete kuti maitiro ekumisikidza akaomarara. Kunyangwe hazvo Fedora iine irinyore intuitive yea graphical installers, zvinongotora nyaya yemasekondi kuti unzwisise.
Kana iwe uine rombo rakanaka uye uchikwanisa kuiisa, une zvitatu zvaunogona kuwedzera mapurogiramu matsva:
Flatpak: Ndiyo nzira huru yekuisa mapurogiramu ane graphical interface. Izvo zvinoitwa zvakangofanana neiyo desktop desktop yeFedora. Iwe unogona kushandisa zvese zviri zviviri Software Center uye iyo terminal.
Toolbox: Inonyanya kushandiswa zvishandiso zvinoshandiswa pamutsetse wekuraira.
Package kurongedzwa: Inonyanya kushandiswa kugadzirisa iyo isingachinjiki chikamu cheanoshanda system (iyo inomiririra system). Zvakare, inogona kushandiswa kuve nemhando dzakawanda dzezvirongwa sevatyairi panguva imwe chete.
Iri pamwe chete neSnap uye .Application nzira yekuisa zvirongwa usingashandisi mashandiro ehurongwa uye uvandudze ivo pasina icho. Fedora Silverblue inogona kushandisa imwechete Flatpak repositori seyakajairwa Linux kugoverwa
Iyo Yekushandisa Bhokisi zvinoita kuti zvive nyore kugadzira midziyo kuyedza musanganiswa wakasiyana wezvishandiso nemaraibhurari.
Zvakanakira kushandisa Bhokisi reMaturusi ndezvi:
Dzivisa matambudziko ekuve nematurusi mazhinji ekuvandudza uye maraibhurari akaiswa, kazhinji zvisingawirirane.
Kana chimwe chinhu chikatadza kufamba, iwe unofanirwa kudzima mudziyo. Hapana chikonzero chekuisazve.
Mune mamwe mazwi, mudziyo wega wega wakagadzirwa wakafanana nekuparadzirwa kwe linux pasina graphical interface.
Uchishandisa kufukidza kwepakeji inogadzira nyowani "kuitiswa", kana mudzi webhuti faira system pasina kukanganisa yazvino. Iyo sisitimu inofanirwa kutangwazve mushure mekuisa.
Kuiswa kwepakeji kunowanzoitwa kubva kumutsetse wekuraira. Kunyangwe ichigona kushandiswa kubva kuSoftware Center yeavo mapurogiramu asingakwanise kuiswa kubva kuFlatpak repositories.
Inoshanda system inogadziridza muSilverblue yakanyatso kubatanidzwa mune iyo desktop. Iyo sisitimu inokuzivisa iwe otomatiki kana inogadziridza iripo. Zvisizvo iyo yekudzoresa inotorwa pasi zvoga. Izvi zvinogona kushandurwa kubva pane zvekuvandudza zvaunofarira muSoftware Center.
Kamwe kugadzirisa kwange kwagadzirira, ingori nyaya yekutangazve kutanga kushandisa iyo nyowani vhezheni. Iko hakuna kumirira kuti iyo yekumisikidza kuti iise mukati meiyi reboot.
Fedora Silverblue Iko kugovera kwakagadzirwa kune zvakanangana nezvinangwa. Mapurogiramu anoda kuyedza maitiro avo munzvimbo dzakasiyana siyana pasina mubvunzo vanozoona zvichibatsira. Ivo vamwe chete ndivo vanoshandisa izvo zvinonzi zvigadzirwa zvemadhijitari.
Handina chokwadi kuti zvinopa zvakawandisa kune zvakajairika mushandisi. Kunyangwe pasina kupokana, mamwe matekinoroji ayo anozopedzisira ave kuiswa muiyo Workstation vhezheni yeFedora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Chii chinonzi Fedora Silverblue. Pachine nzvimbo yezvakapihwa zvekutanga
Oscar Reyes akadaro
Zvinoita sekunge ndichaenderera mberi neFedora Workstation….
Pindura kuna Oscar Reyes
Linux 5.0 inosvika kumagumo ehupenyu hwayo kutenderera. Gadziridza izvozvi